Wasiir ku xigeenka iyo masuuliyntaa hayda shaqala oo kulan wadaa yeeshay | Burconews
Wasiir ku xigeenka iyo masuuliyntaa hayda shaqala oo kulan wadaa yeeshay
September 26, 2018 - Written by burconews 1
WASAARADA WAXBARASHADDA IYO HAY’ADA SHAQAALAHA QARANKA OO IS AF-GARAD KA GAADHAY BUUXINTA SHAQOOYINKA KA BANAANAADAY WASAARADA WAXBARASHADDA
Wasaarada waxbarashada iyo sayniska iyo hay’ada shaqaalaha qaranka ayaa is af-garad ka gaadhay sidii loo buuxin lahaa kaalmaha shaqo ee ka banaanaaday guud ahaan wasaarada waxbarashadda, ka dib baadhis dheer oo ay hay’ada shaqaaluhu ku samaysay dhammaan shaqaale weynha wasaaradda waxbarashadda iyo sayniska, waxay hay’ada iyo wasaaradada waxbarashaduba si wada jir ah u soo wada mareen dhammaan gobolada dalka, si loo tirakoobo shaqaalaha waxbarashadda ka hawlgala goobaha waxbarashadda.
Shir si wada jir ah u wada yeesheen wasaarada waxbarashadda iyo madaxda hay’ada shaqaaluhu waxay is faham buuxa ka gaadheen maxsuulkii ka soo baxay xogtii laga soo qaaday gobolada iyo degmooyinka dalka. Shir si wada jir ah u qabteen Wasaarada waxbarashadda iyo hay’ada shaqaaluhu ayaa lagu qabtay xarunta manaahijta ee wasaarada waxbarashadda halkaasi oo lagu falanqeeyey, sixista iyo diwaangalinta shaqaalaha wasaarada waxbarashadda. Kulankaas waxa ka soo qaybgalay wasiir kuxigeenka wasaaradda waxbarashadda Mudane Cabdulqaadir Maxamuud Sh Muxumed, Gudoomiyaha hay’ada Shaqaalaha qaranka Mudane Sharmaarke Axmed Muxumed Geele, gudoomiye kuxigeenka hay’ada shaqaalaha iyo gudoomiyayaasha waxbarashadda ee heer gobol ayaa dood dheer la isla meel dhigay xalka lagu wajahayo hawlaha diwaangelinta shaqaalaha waxbarashadda.
Ugu horeyn waxa shirkaasi ka hadlay, gudoomiyaha hay’ada shaqaalaha Mudane Sharmaarke Axmed Muxumed Geele waxaana hadaladiisii ka mid ahaa; kullankan aanu saaka la yeelanay wasaarada waxbarashaddu waxa uu daarranaa sixista, hubinta iyo diwaangelinta kaalmihii ka banaanaaday macalimiinta ka hawlgala dugsiyada dalka. Maadaama oo uu soo dhammaaday dib u sixidii, diwaangelintii iyo tirakoobkii aanu ku soo samaynay shaqaalaha wasaarada waxbarashaddu, waxan hadda isla qaadanay sidii aan u bilaabi lahayn buuxinta kaalmaha banaanaaday.
Hay’ada shaqaalaha dawladu waxay ugu timi wasaarada wabarashadda oo duruuftoodu mid gaar ah tahay sidii aan iskula eegi lahayn siyaabaha loo buuxinayo kaalmaha banaanaday, sidaa darteed wasaarada waxbarashadda iyo hay’ada shaqaaluhu waxay isla garteen nidaamka ay buuxintoodu noqonayso, sababta oo ah wasaarada waxbarashadu waxay ku shaqaysaa hab ka duwan wasaaradaha kale, waxaanay buuxiyaan marka macalinka shaqada ka baxa ama ka taga, iyaga oo keena mid kale oo sii buuxiya xiisadaha dugsiga, si aan waxbarashada ardaydu u kala go’in, sidaa darteed anaga oo tixgalinayna waxan si buuxda iskula qaadanay in aan kormeer ku soo wada samayno dhammaan gobolada iyo goobaha waxbarashadda ee dalka oo dhan si aan iskula soo suggno macalimiinta ka hawlgasha goobaha waxbarasho ee dalka oo dhan.
Ka dib, marka aan kormeerka soo dhammayno waxan samayn doonaa isku bedelka macalimiintii ka tagtay shaqada iyo kuwa wasaaradu ku bedeshay si ay hawlaha waxbarashaddu halkaa uga sii socoto.
Waxan macalimiintaa ugu baaqayaa in ay ku suggnaadaan goobaha ay ka hawlgalaan, si loo soo xaqiijiyo hawlaha ay qaranka u hayaan isla markaana looga dhigo shaqaale rasmi ah oo ka hawlgala wasaarada waxbarashadda. Ugu danbayn waxan madaxda wasaarada waxbarashada uga mahadnaqayaa sida milgaha iyo sharafta leh ee ay noola shaqeeyeen mudadii aanu hawshan ku jirnay.
Wasiir kuxigeenka wasaarada waxbarashadda iyo sayniska Mudane Cabdulqaadir Maxamuud Sh Muxumed ayaa isaguna kullankaasi ka hadlay waxaanu ku bilaabay; mudaba waxad warbaahinta ka maqlayseen hawlihii diwaangalinta ee shaqaalaha dawlada oo ay ku hawlanaayeen hay’ada shaqaaluhu. Saaka waxan halkan wada joognaa madaxdii ugu saraysay hay’ada shaqaalaha si aanu iskula saxno diwaangalinta iyo isku bedelka macalimiinta kaalmaha banaysay iyo kuwa hadda ka hawlgala goobaha waxbarashadda. Sidaa darteed waxan si hufan iskula qaadanay hay’ada shaqaalaha in aan isku bedel ku samayno macalimiintaasi. Waxan macalimiinta ugu baaqayaa in ay diyaar u noqdaan kormeer aanu ku soo samayn doono dhammaan macalimiinta ka hawlgala gobolada iyo degmooyinka dalka.
Waxan hay’ada shaqaalaha dawlada uga mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee ay noola shaqeeyeen intii aan ku jirnay hawlahan lagu hubinayey shaqaalaha ka hawlgala wasaaradda waxbarashadda iyo sayniska.